BUSINESS – Page 2 – Daily Som
Xiisad Ka dhalatay Xi ka qaadis Duqa Magaalada Baladwayne oo haatan ka taagan Magaaladaas
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baladwayne ee xarunta gobalka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaas ay si xowli ah uga socoto xiisad ka dhalatay Shaqo jiijin lagu sameeyay Duqii magaaladaas. Ciidamo fara badan oo raacsan Duqa magaalaa Cali Dhuux Cabdi Mahadale ayaa lagu arkayaa wadooyinka waawayn ee Magaalada kuwaas oio qal qal galiyay Amaanka Magaalada. warka […]
yariisoow oo kala hadlay Safiirka Masar in ay maal gashi ku sameeyaan Muqdisho
By Staff on March 21, 2018 BUSINESS
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiiraxmaan Cumar Cismaan eng. yariisoow ayaa kulan kula qaabilay Xafiiskiisa Safiirka Dowlada Masar ee fadhigiisu yahay maghaalada Muqdisho. Kulank au yeesheen eng. yariisoow iyo Danjire Mowliid Ismaaciil oo ay waheliyaa Madax ka socta bangiyada Masar ayaa waxaa diirada lagu saaray arimo dhowr ah oo ay kamid yihiin Xiriirka ka […]
Somaliland oo Xarun G\_nacsi ka furatay Imaaraatka
Maamulka Somaliland ayaa Magalada Dubai ka furtay Xarun Ganacsi ka dib booqasho taariikhi ah oo ku tagay Madaxwaynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Xarunta Ganacsiga ee Somaliland ka furay Imaaraatka ayaa waxa ay kaalmayn doontaa sida lka xiqiijiyay Xiriirka Ganacsiga Somaliland iyo Imaaraatka, iyada oo uu ka shaqayn doono kala dhofinta imaaraatka iyo Somaliland. Muuse […]
Madaxwaynhii hire ee fransooska Nicolas Sarkozy oo loo kaxeeyay Saldhig boolisk iyo eedaymo loo haysto
By Staff on March 20, 2018 BUSINESS
Madaxwaynhii hore ee dalka Farasiiska Nicolas Sarkozy ayaa loo ka xeeyay Saldhig boolis oo ku yaala dalkaas, hogaamiyha ayaa lagu eedeeyay in uu si sharci daro ah lacag uga qaatay Hogaamiyihii hore ee liibiya Col Muammar Gaddafi booliska fararsiuiska ayaa ka soo kaxaysatay hooygiisa ayaga oo la aaday saldhiga si wax looga waydiiyo eedeymaha loo soo […]
Maamulka Puntland oo ka hadlkay Doon shalay ku gubatay Dekada Magaalada Boosaaso
Maanmulka Puntlnd ayaa ka hadlay Doon shalay Ku soo caarisay xeebaha Magaalad Boosaaso, oo uu ka dhshay khasaare maaliyadeed oo baaxad leh. Doontaan oo ayahayd mid ka soo shiraacatay Magaalada Dubia eexarunta Imaaraatka Carabta ayaa la sheegay in ay siday alaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen shidaal, Gawaari iyo bagaasha. Wasiirka Gaadiidka Maamulka […]
Tajaabadii Uper ee Baabuurta Is wada Oo la hakiyay
shirkada Upe rayaa hakisay Gaari ay soo saartay oo aan ubaabhayn Dawaral ama wado waxaana lag sheegay in ay khasaaro gaysteen. shirkada ayaa lagu waday in aytijaabo ku samyansp Gawaarida isw ado kuwaas oo lagu tijaabin lahaa dhamaan wadooyinka America, waxaana hakinta loo sambeeyay Shil khasaare gaystay. waxaa ku dhimatay Naag 49 sano jir ah […]